Yese Email Kushambadzira Iyo Sizzles Haisi Spam
Svondo, November 24, 2013 Svondo, November 24, 2013 Douglas Karr
Iyi infographic kubva kuLeadPages, mhinduro yekumhara peji, inopa imwe nzwisiso huru mukushambadzira kweemail uye nhamba dzeSPAM Chinokosha kune iyi infographic ndechekuti mangani maemail anotenderwa anomira mune yejunk folda. Mikana ndipo pane vazhinji vako, zvakare. Mvumo-yakavakirwa email inoenderera ichitungamira iyo pakiti mune inoshamisa yekudzvanya-kuburikidza uye shanduko mitengo. Saka mabhizinesi mazhinji ari kuisa simba ravo rese mukutsvaga nzira dzekutyaira traffic yakawanda yavanokanganwa nzira dzayo
Email Kuchengetedzeka uye Kushandisa Pasi Pose
Mugovera, Kubvumbi 6, 2013 Monday, May 6, 2013 Douglas Karr
Isu nguva pfupi yadarika takazviisa mune rimwe dambudziko nedura redu rekutumira email patakatangazve mamwe maemail kero eakaundi kuaccount yedu. Tani yadzo yakapunzika, takawana zvichemo zveSSPAM uye mumwe munhu akatsamwa zvekuti vakasangana nemupi wedu pachezvake kuti vanyunyute. Isu takapwanya kubvisa akadaro maemail kero kubva kuaccount zvinoenderana nechikumbiro kubva kune yedu email mupi. Iwo maverengera mune ino infographic kubva kuSampula E-mail inonongedza zvakananga
Email Yakafa Here?
Chipiri, January 3, 2012 Chipiri, January 3, 2012 Douglas Karr
Pandakaverenga nyaya ichangoburwa pamusoro peboka reIT muUK rakarambidza email, ndaifanira kumira ndofunga nezvezviitiko zvangu zuva nezuva uye kuti email yakawanda zvakadii inondibira zuva rinobudirira. Ini ndakabvunza mubvunzo kuvaverengi vedu kuburikidza neZoomerang poll uye vashoma kwazvo vakafunga kuti email yaizofa chero nguva munguva pfupi. Dambudziko, mumaonero angu, harisi email. Kana email ichishandiswa zvinobudirira, ndizvo
Chakavanzika Chakasviba cheEndaneti Kushambadzira neInternet Service Vapi
China, November 8, 2007 Chitatu, September 4, 2013 Douglas Karr
Pane chakavanzika chine tsvina muindasitiri yeemail. Ndiyo nzou iri mumba umo isina anotaura nezvayo. Hapana anogona kutaura nezvazvo nekutya kuripwa nevanhu chaivo vanofanirwa kunge vari mapurisa edu eInbox. SPAMI HAPANA CHOKUITA NEI Mvumo Icho chiri chokwadi. Iwe wakazvinzwa iko pano. Ndinozozvidzokorora… SPAM HAIYE CHIITI NEI Mvumo Mimwezve nguva… SPAM HAPANA CHOKUITA NEI Mvumo